आज शुक्रबार काभ्रेबाट प्रकाशित अखबारहरु
शुक्रबार काभ्रे जिल्लाबाट ४ वटा साप्ताहिक पत्रिकाहरु प्रकाशन हुँदै आएको छ । सञ्जीवनीपत्र, जनप्रतिरोध, तीर र बेथानचोक साप्ताहिक रहेका छन् । आज हामीलाई बेथानचोक साप्ताहिकमात्र उपलब्ध भएको छ । बेथानचोकले काभ्रेका स्थानीय तहहरुमा कृषि अनुदानलाई विशेष प्राथमिकताः कुन शीर्षकमा के–कति अनुदान, कृषक नै अनभिज्ञ शीर्षकमा मुख्य समाचार बनाएको छ । यस्तै ओली सरकारविरुद्ध काँग्रेस सडकमा उत्रिएको समाचार पनि रहे
आज विहीबार काभ्रेबाट प्रकाशित अखबारहरु
आज काभ्रे जिल्लाबाट प्रकाशित चेष्टा साप्ताहिक र सुसन्देश साप्ताहिक पत्रिका प्राप्त भएको छ । चेष्टाले ४ सय ३ महिलाको अदालतमा मुद्दा शीर्षकमा मुख्य समाचार बनाएको छ । यस्तै, जिसस कोष ‘फुक्का’, ४३ करोड बाँडफाँड, तीन करोडमा ‘सपिङ्ग कम्प्लेक्स’, सामुदायिक बनको खातामा थुप्रियो २ करोड लगायतका समाचार सामग्रीहरु प्रकाशन गरेको छ । सुसन्देशले नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पाँचथरदेखि जनसम्वाद कार्यक्रम लिएर भुकण्डे आइपुगेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । थप जानकारीका लागि पत्रिकाको वेबसाइट र फेसबुक पेज तथा प्रिन्ट संस्करण हेर्न अनुरोध छ ।
बहसमा काठमाडौं–पाँचखाल विद्युतीय रेलमार्ग
उचाइ र गहिराइको भूधरातल नमिलेर केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग नबन्ने भयो भने बनाउनैपर्ने रेलमार्ग काठमाडौं–पाँचखाल हाे नेपालमा अहिले विकासका शब्दचित्र कोर्ने काम भइरहेको छ । पत्रपत्रिकामा यस्ता चित्र छ्याप्छ्याप्ती आइरहेका छन् । केहीले बोलेर व्यक्त गरेका छन् भने केहीले लेखेर । केरुङबाट रसुवागढी र त्रिशूली उपत्यकाको विदुर हुँदै शिवपुरीको फेदीमा सुरुङ खोपेर फुत्त टोखामा निस्कने चिनियाँ रेल कोरिसकिएको चित्र हो । त्यस्तै टोखाबाट धादिङको बैरेनी हुँदै पोखरा र बैरेनी हुँदै लुम्बिनी, यो पनि कोरिसकिएकै चित्र हो । मेची–महाकाली, रक्सोल–काठमाडाैं, जनकपुर–बर्दिवास यी पनि कोरिसकिएका चित्र हुन् । बाँकी चित्र कोरिँद...
भोलिको उच्च शिक्षाबारे विचार गराै‌ं
प्राडा सुरेशराज शर्मा राणाकालपछि पञ्चायतकाल रहुन्जेलको उच्च शिक्षालाई हिजोको भनौँ । पञ्चायतकालपछिको शिक्षालाई आजको भनौँ । अब हुनुपर्नेलाई भोलिको शिक्षा भनौँ । हिजोको उच्च शिक्षा करिब २० वर्ष भारतकै शिक्षाको निरन्तरता थियो भने हुन्छ । त्यसो हुनुमा बाध्यता थियो । हाम्रा कलेजबाट निस्केका छात्रछात्राले भारत वा दक्षिण एसियामा पढ्न त्यहाँबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपथ्र्यो । ढाँचा अर्थात् पाठ्यक्रम, पठन–पाठन र परीक्षा त्यहाँको जस्तै गरेमात्र सम्भव थियो । २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि हाम्रो स्नातकोत्तर तहको पढाइलाई झन्डै–झन्डै भारतले डोर्‍याएको थियो । प्राविधिक विषयका भनौं वा वि...
माघ १९ देखि ‘रोशी साकोस’ पनौती कप फुटबल प्रतियोगिता
पनौती नगरपालिका र स्थानीय संघसंस्थाहरुको आयोजनामा वडास्तरिय फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना हुने भएको छ । पनौती–७, सिरानचौरमा निर्माणाधीन क्षेत्रिय रंगशालाको प्रवद्र्धन गर्ने र नगरपालिकाभत्रिका उत्कृष्ट खेलाडीहरुको पहिचान गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाको सहयोगमा विश्राम समाज, मानेश्वरी ग्रुप तथा रोटरी क्लब अफ पनौतीले संयुक्त रुपमा फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेका हुन् । आगामी शनिबारबाट सुरु हुने सो वडास्तरीय फुटबल प्रतियोगिता ‘लिग कम नक आउट’ प्रणालीमा खेलाइने समाजका अध्यक्ष डा. राजेन्द्र ताम्राकारले जानकारी दिए । प्रतियोगितालाई रोशी बचत तथा ऋण सहकारीले टाइटल स्पोन्सर गर्ने भएको छ । ‘यो वर्ष पनौती...
काभ्रेमा ६ वटा प्रहरी भवन बन्ने
प्रदेश नं. ३ सरकारले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा प्रहरीका लागि ६ वटा नयाँ भवन बनाउने भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले काभ्रेसहित १० वटा जिल्लामा प्रहरीका नयाँ भवन बनाउन लागेको हो ।
च्याउ खेतीः ३ हजार रुपैंया लगानीको यात्रा, ६० लाख हाराहारीमा
वि.सं. २०४६ सालको कुरा हो । पनौती–१०, खोपासीका कृष्णदास उलकले ३ हजार रुपैंयाको लगानीमा १ सय वटा बल(कन्ये जातको च्याउ खेती गरिने परालको पोका) मा च्याउ खेती गरे । त्यसबाट ३० हजार रुपैंया आम्दानी लिन सफल भए । नसोचेको आम्दानीबाट हौस्सिएका उनले सोही वर्ष खेतीलाई बिस्तार गर्दै १ हजार वटा बलमा पु¥याए । च्याउको उत्पादन पनि मज्जाले भयो । तर, काठमाडौं धाउँदासमेत उत्पादित सबै च्याउ बेच्न सकेनन् । ‘खिचापोखरीमा कागती बेच्ने मधेशी व्यापारीले च्याउ किनिदिन्थ्यो । उसले दिनमा जम्माजम्मी १० किलो बेच्ने भएकाले केही मसँग र केही बलम्बुका किसानसँग लिन्थ्यो । उसले लिन नमानेको च्याउ फिर्ता ल्याएर धेरै पटक बनेपाको पु...
सुभासको स्मृतिमा पाँच समाजसेवी सम्मानित
काभ्रेका शिक्षासेवी चन्द्रबहादुर खड्काले दिवंगत छोरा सुभासको स्मृतिमा स्थापना गर्नु भएको सुभास स्मृति प्रतिष्ठानले स्वर्गीय सुभास दिवंगत भएको संखुवासभाको खाँदबारीस्थित हिमालयन माविका कक्षा ११ मा अध्ययनरत पाँच विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र समाजमा उल्लेख्इ योगदान गर्ने पाँच समाजसेवीलाई सम्मान गरेको छ ।